Anguilla dia manavao ireo fombafomba momba ny fahasalamam-bahoaka ho an'ny mpitsidika
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Anguilla Travel News » Anguilla dia manavao ireo fombafomba momba ny fahasalamam-bahoaka ho an'ny mpitsidika
Ny vidin'ny fangatahana sy ny fepetra takiana amin'ny toerana tokony ahena ho an'ny olona vita vaksiny feno.
Anguilla dia mamindra soa aman-tsara ny nosy izay hamelombelona ny toekarena.
Ny fizarana sy fitantanana programa vaksinina any Anguilla dia misy fiatraikany lehibe amin'ny fizahan-tany ao amin'ny faritany.
Misy protokolom-pahasalamana vaovao sasany izay hanan-kery eo noho eo raha ny hafa kosa hitranga amin'ny dingana maromaro.
Ny Birao mpanatanteraka Anguilla dia nanaiky ny paikady COVID-19 Exit, izay misy andiana protokol fidirana nohavaozina, ny sasany hanan-kery eo noho eo, ary ny sasany kosa hampahafantarina amina dingana maromaro ao anatin'ny volana ho avy. Ny paikady dia natao hamindra ny nosy soa aman-tsara amin'ity vanim-potoana lava misy ny fihenan'ny toekarena ity amin'ny famoronana asa asa ilaina hamelomana ny toekarena.
"Ekenay fa ny fanaparitahana sy fanaparitahana fandaharan'asan'ny vaksinim-borona eo amin'ny tsenantsika lehibe ary koa eto Anguilla dia misy akony lehibe amin'ny indostrian'ny fizahantany," hoy ny Hon. Minisitry ny fizahan-tany, Andriamatoa Haydn Hughes. “Rehefa betsaka ny olona vita vaksiny, ary manomboka mihombo ny areti-mifindra vaovao, mino izahay fa mendrika ny famerenana sy fanavaozana ireo kaonty fidiranay ankehitriny. Toy ny mahazatra, ny fahasalamana sy ny fiarovana ny mpitsidika antsika sy ny mponinay no zava-dehibe indrindra, ary izahay kosa dia manana fomba fiasa miverina amin'ny fanokafana feno sy azo antoka ny nosintsika. ”